सम्भवतः भन्दा बढी भन्दा पुरानो मिस्र (2,5हजार वर्ष पहिले) यौन पोषणको उपन्यासको बारेमा भनिने कथित कथा हो कि शुद्ध पानीको सत्य हो। र आधुनिक युरोपको क्षेत्रमा तिनीहरूको उत्पत्तिको रूपमा, इतिहासकारहरूले विश्वास गर्छन् कि पहिलो भाइब्रेटरहरू विक्टोरियन युगको ग्रेट ब्रिटेनका डाक्टरहरूले प्रयोग गर्थे, जसले गर्भनिरोधी महिलाहरूको हस्तमैथुनसँग व्यवहार गरे।
तर सबैभन्दा लोकप्रिय सेक्स खिलौना पुरुषको लागि सिर्जना गरिएको थियो। एक पटक (र आजको तथ्य पहिले नै पुष्टि भएको छ), हिटलरले ड्यानर डाक्टरबाट सैनिकहरूको लागि रबर महिलाहरूलाई आदेश दिए। यसबाहेक, फेडरले पनि "रबड जेना" को आदर्श कस्तो देखिन्छ भनेर वर्णन गरे, र निस्सन्देह, उनी आर्यनको रूपमा थिए। हिटलरको अनुसार, यो सिपाहीहरूको लागि जीवन बिताउन सजिलो थियो जसमा मापदण्डहरू थिए, जस्तै सिफिलिसका मक्खनहरू र सबैभन्दा स्वस्थ वेश्याहरू होइनन्।
आधुनिक सेक्स खिलौने
तर निर्माताहरु रबड गुड़िया भन्दा बढि अगाडी गए। आज को पुरुष सेक्स खिलौनेहरु धेरै अधिक व्यावहारिक छन्। किन तपाईंलाई पूर्ण गाँठो चाहिन्छ भने, यदि तपाई ब्याट्रीहरूमा भाइब्रेरी योनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ?
पुरुषहरु को लागि आधुनिक सेक्स को खिलौने एक उच्च गुणवत्ता र यथार्थवादी तरीका मा बनाइन्छ, जुन महिलाहरु लाई कभीस बोसबम्प्स छ - चाहे उनि महिला को आवश्यकता हो, यदि तपाईं यसलाई खरीद सकते हो र सेक्स को दोकान मा पुरा तरिकाले पार्स गरिन सक्छ, यो "टाउको दुखाइ" छैन, यो मा सूटकेस ...
प्रकृति द्वारा आशावादी हुन, हामी तपाईंलाई आश्वासन दिछौं: पुरुष र स्त्रीहरू एकअर्कातिर उत्प्रेरित हुनेछन्, किनभने फिजियोलोजी र जेनेटललहरूको उचित आकार पनि एक ऊर्जा आकर्षण, प्रेम, प्रशंसा, रोमान्स पनि हो। एक सेक्स खिलौनेले तिनीहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि दुवै लिंगको सेवा गर्दछ - तिनीहरू बक्समा दिनचर्या हटाउँछन् र तपाईंको साथीको सहयोग गर्दा अर्को "महिला माइग्र्रेन" पाउँछन्।
सुखद मज्जाको लागि एक व्यक्ति
हिटलरको समयमा सेक्स भित्ताका प्रयोगका कारण हामीले फेडरर गुड़ियाको सुधारिएको टसोको उदाहरण दिनेछौँ। आज सेक्स को पसलहरुमा तपाईं पूर्ण आकार महिला टोरो खरीद सकते हो, कंधे, छाती (5 आकार), पेट। बस्ट cybercrake बाट बनाइएको छ, र यसलाई उपहारको रूपमा तपाईं गुडियाको लागि एक डीभीडी, एक स्नेहक, र एक "डिटर्जेंट" प्राप्त गर्नुहुनेछ। एक साथीको लागि राम्रो उपहार जो पोर्नोग्राफी हेर्दा हस्तमैथुन गर्न मनपर्छ।
एक सैनिकको गुड़ियाको शरीरको अर्को भाग केटीको टाउको आकर्षक आकर्षक र काम गर्ने मुखमा छ। पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो सेक्स कोष जसको साझेदारहरूले तिनीहरूलाई मौखिक कारवाहीमा इन्कार गर्छन्। र महिलाहरु को लागि - एक विचार गर्न को लागि विचार: के यो यस्तो खुशी को मीठा देखि भोग मूल्य छ?
र पुरुष जो सधैं आफ्नो यौन प्यारामिटर संग असंतुष्ट हुन्छन्, हामी प्रोस्टेट को लागि उत्तेजना प्रदान गर्दछौं। धेरै गति कार्यक्रमहरूमा बोलाइएको प्रचलित खिलौना कार्यहरू र रिमोट कंट्रोलको मद्दतमा स्विच गरिएको छ।
घर का बना सेक्स खिलौने
त्यहाँका घटनाहरू छन् जब यो मामलाले एक फंतासी समावेश गर्दछ जसले पुरुषहरूको लागि यौन सम्बन्धी खिलौने उत्पन्न गर्दछ। एकै समयमा, महिलाहरू भान्सामा वस्तुहरूको उत्सुक पङ्क्तिको विफलता देखिरहेका छन् ...
पुरुष सेक्स खिलौना बनाउन, तपाईंलाई बोतल चाहिन्छ, भत्काउने भाँडाको लागि केही स्पंजहरू, एक बुलबुला लपेटो (जो कि पिटेको चीजको वरिपरि लुगा लगाउँदछ), स्कटच टेप, कैंची। बोतलबाट घाँटी काटेर, कटौतीमा कुनै तीव्र कोणहरू छैनन्। एक फिल्म मा लिपटे र चिपकने वाला टेप संग तय। दुई सेट स्पंज बनाउनुहोस्। हामी तिनीहरूलाई बोतलमा राख्दछौं र बबल, ओठको बीचमा नरम छेद, जुन धेरै पुरुषहरूले आफ्नो उद्देश्य उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्छन्।
के यौन सम्बन्ध छ?
वैसे, सेक्स को खिलौने को सम्बन्ध मा यौन जुदाई को बारे मा। यस मा महिलाहरु अधिक रूढ़िवादी छन् र तिनीहरुमध्ये अधिकांश प्राकृतिक यौन रुचि राख्छन्। कारण यो कारण हो कि महिलाहरु को लागि, यौन एक मनोवैज्ञानिक डिटेन्टेन्ट हो, जो महिला मानसिकता को चरमता संग जरूरी छ। तर पुरुषहरूको लागि यस मुद्दाको रोमान्टिक पक्ष कम महत्त्वपूर्ण छ, र प्रायः प्रायः उनीहरूको शारीरिक आवश्यकताहरु लाई पथोस बिना अचम्म लाग्नु पर्छ। र यौन सम्बन्धको पक्षमा एक "बढी" को लागी: पुरुषहरू, कम्प्लेक्सिमीमीहरू, महिलासँग बिस्तारै रमाइलो हुन्छ, जसलाई तिनीहरूसँग भावनाहरू छैनन्। यसैले, पुरुषहरु बीच, वेश्याहरु र सेक्स को खिलौने धेरै सामान्य हो।
10 संकेतहरू जुन तुरुन्तै सेक्स चाहिन्छ
शब्दहरूसँग कसरी मानिसले उत्तेजित गर्दछ?
तपाईंलाई मानिस चाहिन्छ भने तपाईंलाई कसरी थाहा छ?
मानिसको हृदयको बाटो
यौन सम्बन्धबाट बेरोजगारी
पुरुषहरूसँग कुराकानी गर्न महिला चालहरू
मौखिक सेक्सको लागि पोष्ट गर्दछ
यौनको साथ मजा कसरी छ?
मैले पहिलो सेक्सको साथ के गर्नुपर्छ?
गुदा सेक्सको लागि शुभकामना
लोला किर्क अनसन स्वर्गको साथ गोल्डेन ग्लोबमा आइपुगे
चियाबाट दाग घटाउन भन्दा?
तिम्रो हातमा पर्खालमा शेल्फ कसरी बनाउने?
जेनिफर एनिस्टनको विकास
मल्टीभर्कमा दूध बखवाट पुष्प
कार्बोहाइड्रेट र खाद्य पदार्थमा प्रोटीन
मित्र किम कार्डशियन र केनी वेस्टले उनको तलाकको खबरलाई अस्वीकार गर्छन्
कोहो संयुक्त को विच्छेद
मुँहासेको लागि मेट्रोइल
घरको बीउबाट गोलोक्सिया
गर्भमा बच्चा कसरी सास पार्छ?
महिलाको थलो - फैशन 2014
महिलाको जाडो स्वेटर
आन्तरिक घर भित्रको ढोका
शॉक! फोटोग्राफरले कचरालाई गोली हान्यो, वर्षौंका लागि संकलन गर्यो